DISTRIKAN’IBESALAMPY : Miverina amin’ny laoniny ny fanarahan’ny mponina ny fandaharan’ny TVM sy RNM
Hifalihavanja indray ny mponin’i Besalampy. Raha nisedra fahasahiranana tamin’ny fanarahana ny fandaharan’ny haino aman-jerim-panjakana : RNM sy TVM teo aloha ireo mponin’i Besalampy dia nivaha an-kehitriny ny olana. 31 juillet 2019
Tsy niandry ela ny Minisiteran’ ny kolontsaina sy ny serasera notarihin’ny ramatoa minisitra Andriatongarivo Rakotondrazafy Lalatiana namaly ny fitarainan’ireo mponina tany.
Raha tsiahivina dia nitaraina tamin’ny Praiminisitra ireo mponina tany an-toerana tamin’ny fandalovany tany an-toerana, tamin’ity volana Jolay ity. Nambaran’ny Praiministra tamin’izany fa tsy maintsy hojerena manokana ny vahaolana tsara haroso maika mba hamaliana ny fangatahan’ireo vahoaka ireo. Nidina ifotony mihitsy ramatoa minisitra nitondra ireo fitaovana tsy nisy tao amin’ny RNM sy TVM tany an-toerana ireo.
Afa-po tanteraka ny mponina ao Besalampy fa hitovy amin’ireo mponina manerana an’i Madagasikara izy ireo noho ny fahazoanana ny RNM sy TVM. An-taonany maro no tsy nahazo afa-tsy fandaharana alefan’ny fahitalavitra mandeha amin’ny zanabolana ireny ny vahoakan’i Besalampy. Ary tsy mijery fahitalavitra, indrindra ny TVM rehefa tsy manam-bola hanaovana « abonnement ». Efa an-taonany maro no nikatso ny fampandrosoana ity haino aman-jerim-pirenena any an-toerana ity.
Fanamby efa napetraky ny departemanta minisiterialy tarihin’ny Minisitra Andriatongarivo Rakotondrazafy Lalatiana amin’ izao ny famerenana amin’ny laoniny ny fampandehanana indray ireo haino aman-jery izay tsy nihodina efa hatry ny ela, ka anisan’izany ny tao Besalampy. Distrika 7 hatreto no efa nitsinjarana ny fanampiana ara-pitaovana « émetteur radio sy fahatalavitra », indrindra ho an’ny haino aman-jerim-panjakana, tao anatin’izay fotoana nitantanany ity minisitera ity.
« Tsy azo atao ambanin-javatra hoy hatrany ny minisitra ny fitarainana entin’ireo vahoaka. Raha ny tao Besalampy manokana, efa an-taonany maro tokoa no nangataka ireo vahoaka ny mba hampitoviana ny fahazoana ny haino aman-jerim-panjakana amin’ireo distrika sasany. Olana goavana no niainan’ity distrika ity tao anatin’izany noho ny tsy fahazoany « émetteur » na io ho an’ny onjam-peo fa indrindra ho an’ny fahitalavitra. Fitaovana vaovao no natolotra tao amin’ny ivo-toerana misy ny TVM sy ny Rnm ao Besalampy, ary mandeha miandalana ny fanampiana izany fitaovana izany, mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitao omena ny vahoaka », hoy ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, omaly tany Besalampy.
Manampahefana maro tany an-toerana toy ny Delegen’ny Serasera, ny Ben’ny tanàna ary ny Lefitry ny lehiben’ny Distrika no nanotrona izao fanomezana fitaovana ho an’i Besalampy izao.